Ny Havozo no Ravintsara
Ela ny ela ka lasa «voan-dalana» ny Ravintsara. Niakatra avy any Antsirabe Bekoto (Mahaleo) dia nivatsy raviny mbola maitso ho tenehina tambavy ary ravina efa somary maina atao evoka.
Niakatra avy any Fianarantsoa aho raha vao nambara hoe tafiditra teto Madagasikara ny Covid-19. Teny an-dalana, heno fa, ankoatra ny lasantsy nilaharana sy ny vary nifandrombahana, dia hoe tsy nahitana vetivety teo ny sakamalao/sakaviro (ary inona ny sakarivondambo, izay mbola hita ao amin’ny Tantara ny Andriana takila 214, lovantsofina nangonina taona 1864-1881) sy ny voasarimakirana. Tao Ambositra, efa ritra avokoa ny HE (huiles essentielles) tao amin’ny Homeopharma. Ravintsara no nokasaiko, fa na ranoka Mandravasarotra (Cinnamosma madagascariensis) aza tsy nisy intsony. Tao Antsirabe, nisy olona nampitondra ravintsara kely voasarongotry ny tanana : sitrany ahay.
Afaka herintaona sy tapany hono vao mety hahita fanafody sy vakisiny hiarovana amin’ny Covid-19. Tsy misy mahandry an’izany. Ronono mafana sy tamotamo. Sakamalao vovony anaty rano matimaty. Sakamalao tsakoina manta. Evoka kininimpotsy. Dia namoaka ny ATA (Aro Tsimoka Aretina) ny IMRA faramparan’ny volana marsa (tsy azo sotroina be loatra mitohitohy fa misy kininina ny fangarony).
Fa miverina amin’ny Ravintsara. Manahirana moa ity anarana teny latina amin’ny bôtanika ity : Agatophyllum aromaticum = Ravensara aromatica = Havozomanitra = hazo teratany eto Madagasikara, nahitana «limonène» (miandry Rakibolana manome anarana malagasy isika fa izany no ho isan’ny hanome hasina ny fitsaboana miainga amin’ny zavamaniry), ary fantatra fa fanefitra «anti-virale» na dia tamin’ny janoary 1775 aza vao nisy fanodinana HE (huiles essentielles).
Ilay Frantsay Pierre Sonnerat (1748-1814), hono, no nametraka anarana «Ravensara aromatica» ny havozo, tany amin’ny taona 1768-1770 tany ho any, raha nivahiny taty amin’ny Ranomasina Indiana sy teto Madagasikara ny tenany. Io Pierre Sonnerat io dia zanak’anabavin’i Pierre Poivre izay «Intendant île-de-France», Nosy Môrisy ankehitriny. Tamin’ireny vanim-potoana ireny no nanomezana anarana ny «coco de Praslin/coco des Maldives/coco de mer», na ilay malaza kokoa hoe «coco-fesses» ary nangalana (sa nangalarana) poivre sy jirofo tany Filipina sy Moluques (Indonezia ankehitriny).
Ny Ravintsara nentin’i Bekoto dia hazo nampidirina teto Madagasikara tamin’ny tapatapaky ny taonjato faha-19. Alaotra, Antsirabe hatrany Ambohimahasoa no tena ahitana azy. Io no Cinnamomum camphora ahitana betsaka 1.8-cinéol izay amokarana ny HE Ravintsara.
Limonène, cinéole : ny Raokandro aloha tsy manana ny fahaizana ara-tsiansa hanazava ny hoe «chémotypes» izay fantarina amin’ny alalan’ny «chromatographie en phase gazeuse à haute résolution couplée à un spectromètre de masse»…
«Ravensara anisata Danguy» (avy amin’ny anaran’i Paul-Auguste Danguy (1862-1942), nandahatra ny zavamaniry avy aty Madagasikara voatahiry ao amin’ny Museum d’histoire naturelle any Paris), «Ravensara aromatica Sonnerat» : miandry ihany koa ny anarana Gasy apetraky ny mpikaroka ao amin’ny FOFIFA, CNRE, sns, isika satria na «Danguy» na «Sonnerat», na Cinnamomum camphora na Agatophyllum aromaticum, very anarana ho Ravintsara.
Tsy voatery ho may Ambondrona, mikoropaka mitady ody-faty amin’ny coronavirus, vao mahatsiaro ny zava-tsoa maro avy amin’ny zavamaniry, izay mampanankarena an’i Madagasikara, ka tokony hitandrovana ny ala : tsy tapatapahana foana, tsy tevehina amin’ny doro-tanety, tsy ripahana hanaovana saribô. Ohatra, ny Mandravasarotra angalana «HE Cinnamosma fragrans», dia heverin’ny mpikaroka malagasy fa azo asolo ny antibiotika amin’ny fiompiana crevettes : «Variabilités chimiques et activités antimicrobiennes des HE de Cinnamosma spp : alternative aux antibiotiques en aquaculture de crevettes» (Razafimamonjison D.E.N.G., thèse de doctorat agroalimentaire et industrie, ESSA, Antananarivo, 2011).
Suzanne Razafy-Andriamihaingo: une grande dame de la Culture
Leçon d’histoire (1)
Changement climatique – Le plus vulnérables démunis
Lynchage à Ambanja – Une vingtaine de personnes enquêtées